Ratsy toetra sy tia tena ny androatokon'ireo milaza azy ho profesora hany ka tsy misy mpandimby mihitsy. Porofon'izany ny fahavitsian'ny olona mahavita fikarohana noho ny sakana mahazo azy ireo. Satrin'ireo mpampianatra zokiny tsy hisy handimby izy. Ny grevy dia efa tarazo isan-taona, fihetsika hanehoana tsy fahafaliana sy tsy fiononana eo amin’ny fiainana. Tsy mipetraka ary tsy maika amin’ny fanjakana ny fanabeazana. Io anefa no anisan'ny fototra hanaovana sy hanatsarana fomba fisainana. Tsy manan-danja ny fampianarana amin’ny sekolim-panjakana ka zary lasa sekolin'ny mahantra. Tsy voabe tsara intsony ny ankizy. Ohatra fotsiny ny tsy fahaizan'ny ankizy ankehitriny ny hiram-pirenena satria tsy mampiaka-tsaina intsony. Ny mpampianatra ihany koa tsy ampy fanofanana ka zara raha mampita, hoy hatrany ity mpanabe ity. Tsy tena iainan'ny mpampianatra ny taranja ampianariny, hany ka tsy tafita sy tsy mipaka ny fahalalana tiana hampitaina amin’ny mpianatra. Ny famerenana ny fanabeazana ara-kolontsaina eo anivon'ny fandaharam-pianarana no anisan’ny vahaolana, hoy izy. Mety ho lavitra ezaka fa hitako mikolo ny fomba fisainana io. Atao matanjaka sy misesisesy ny fanabeazana ho olom-pirenena vanona hahafahana manajary fisainana. Tokony hisy matetika ny fanofanana mitovy hahafahana mampitovy lenta ny endri-pampianarana. Mila olona resy lahatra amin’ny fanabeazana ny mitantana ny minisiteran'ny Fanabeazana, hoy ny Dr Tsiky Rakotomavo.